गरीबको पेटमा दन्किएको भोकको आगो निषेधाज्ञाले नै निभाउने ? (भिडियो ) – " सुलभ खबर "
गरीबको पेटमा दन्किएको भोकको आगो निषेधाज्ञाले नै निभाउने ? (भिडियो )
अहिले काठमाडौका विभिन्न चोक र खुल्लामञ्चमा यसरी रोजिरोटी गुमाएका अनि छाक टार्न दाताहरुले वितरण गर्ने खाना कुरेर सबेका हजारौँ भेटिन्छन् ।महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञमा कामसँगै माम गुमाएका प्रतिनिधि पात्रहरु हुन् उनीहरु ।
सरकारले दैनिक कोरोना संक्रमित र मृतकको तथ्याङक सार्वजनिक गर्ने, अर्ध र पूर्ण निषेधाज्ञ घोषणा गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। तर यहि कारण घर भित्रै थुनिएका फुटपाथ, ठेलागाडा तथा नाङ्लोमा व्यापार गरेर गुजारा गर्नेहरुको अवस्थाका बिषयमा कुनै योजना सार्वजनिक गरेन् । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा आश्रीत बनेका हजारौँ जना ६ महिना देखि बेरोजगार छन् ।
१३ माघ, सप्तरी । दिउँसोको २ बजे । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा घाम लागेको थिएन ।